Nanamarika iny hetrinandro lasa iny ny fanendrena ny Jeneraly Richard Ravalomanana ho lehiben’ny fibaikoana ny zandarimaria hisolo ny Jeneraly Bruno Razafindrakoto. Fanendrena izay manaraka ny rindran-damina eo amin’ny fiadidina ny zandarimaria raha ny fanazavana avy amin’ny foloalindahy. Na dia mbola tsy vita aza ny fifamin-drampahefana teo amin’izy roa lahy ireto dia efa nametraka ny laharam-pahamehany ity kaomandin’ny zandarimariam-prenena vaovao ity.
Resaka nataon’ity lehiben’ny zandary ity ny famerenana ny fandriampahalemana any atsimo. Ho alefa any amin’ireo toerana fa mahamaivay hoy izy ny sangany amin’ny olona feheziny toy ny avy ao amin’ny Fign. Averina ihany koa ny faentana aireo tarika ireo mba tsy handairan’ny ramatahoran’ireo dahalo ka na ny zavatra bitika nampianarina azy toy ny mampiasa basy aza lasa adinony. Ny asan-dahalo izay mbola mafy any atsimo ary ahitana fifandonana mahafaty isan’adro. Inona araka izany fa dia hitondra aim-baovao eo amin’ny mpitandro ny filaminana ny nanendrena olona manam-pahaizana sy efa za-draharaha to any Jeneraly Ravalomanana izao.
Nifanindran-dalana tamin’izao fanovana eo amin’ny zandaria izao ny nisitonana ireo zandary miparitaka any anaty andrimpanjakana any. Anisan’izany ny zandary 9 mpiambina manokana an’Andriamatoa Alain Ramaroson, mambra ny filan-kevitra ambonin’ny tetezamita sady lehiben’ny kaomisiona momba ny fandriampahalemana ao amin’ity andrimpanjakana ity. Tsy nanohitra izany famerenana azy any andakazey izany rahateo ireto zandary ireto, ary namela azy ireo malalaka ko any olona nambenany taloha. Na izany aza nefa dia nahabe reaka tan-gazety ihany ity fihetsika izay lazain’ingahy Alain Ramaroson fa misy ambadika politika. Ny jeneraly Ravalomanana kosa dia nanamafy fa raha misy ny olana mety hiseho aorian’izao fisitonana izao dia misy ireo andalatoham-pahefana azoniizay mahatsiaro fa voatohitohina ny zony antonina. Ny mpanara-baovao koa dia manomboka mahatsapa fa misy tsy fifanarahana ihany amin’izy roalahy ireto taorian’ireny famoahana anaran’olona nataon’ny fianakavina Ramaroson ireny momba ny « famonoana » an’i Nadine Ramaroson. Tantara mitohy ny amin’iny…
Nibahana ny fampalalam-baovao maro koa ny ny herinandro teo ny fampiakanana an-dapa teny Iavoloha ireo filoham-pokotany avy eto Antananaeivo Renivohitra. Fanasana manopkana avy amin’ny Fat Andry Rajoelina io mba hoentina hanomezam-boninahitra ireo hany sisa olom-boafidim-bahoaka mitondra ity firenena ity. 96 ireo notolorana mari-bonionahitra ary vola 10 lavitrisa ariary no nampanantenana fa homen’ny fanjakana hanampiana azy ireo amin’ny fanamboarana fotodrafitr’asa. Ny biraom-pokotany no lohalaharana amina’ireo fotodrafitrasa ho atsangana ireo. Ankoatry ny teto andrenivohitra dia nanafatra ko any Fat fa hitsidika ireny fokotany any amin’ny faritra hafa ireny koa ato ato.
Ny Fat izany nanao fitsidiham-paritra tany Toamasina ny faraparan’ny herinandro teo. Teo aloha ny fitsidihanny toeram-piasan’ny tetik-asa Ambatovy izay mitrandraka sy manodina ary manondrana ny Cobalt sy ny Nickel ao atsinanana’ny Madagasikara. Ny Fat izay nanokatra ofisialy izany fitrandrahana izany. Ity orinasa ity no lehibe indrindra eto amin’ny nosy ary faharoa amin’ny famokarana ireo akora ireo eto an-tany satria dia vola mitentina 5,5 lavitrisa dolara no apiasainy amin’izany. Mampidi-bola ho an’ny fanjak ana avy amin’ny hetra izy ity ankoatry ny 25 tapitrisa izay efa nomeny hanaovana asa fampandrosoana ara saosialy. Nasian’ireo tompon’andraikitra ao tsindri-peo manokana moa ny
Tags: MadagasikaraCategories: Actralité